Iphupha nge-Whirlwind ▷ ➡️ Fumana kwi-Intanethi ▷ ➡️
Ngaphantsi kweemeko ezithile, i-vortex inokubumba emanzini ahamba ezantsi. Oku kuhlala kunjalo kwi-rapids emilanjeni okanye kwiingxangxasi, umzekelo. Into eyingozi malunga nebhafu eshushu sisiphumo sokutsala esidonsa abahlambi okanye amaphenyane amancinci ezantsi njengefaneli. Yiyo loo nto abantu belunyukiswa kaninzi ukuba bangadadi emilanjeni nasemachibini angachazwanga ngokukodwa njengamanzi okuhlamba.
Ukuba umntu uphupha ngokubanjiswa kwindawo evuthuzayo, mhlawumbi boyika ukuntywilisela kunye nokuphakuzela. Ngokufanelekileyo, umntu oleleyo uzama ephupheni ukuba azikhulule kumtsalane omtsalayo. Kwitoliki yamaphupha alo mfuziselo wephupha, kugxilwe kwimeko yangoku yobomi bomphuphi kunye neemvakalelo zakhe.
1 Uphawu lwephupha «i-vortex yamanzi» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «vortex» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «amanzi vortex» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «i-vortex yamanzi» - ukutolikwa ngokubanzi
Umfanekiso wephupha "le-whirlpool" usekwe kuhlalutyo ngokubanzi lwamaphupha. Isimboli yengozi Ukuphupha okwangoku kukwimeko enzima kwaye edidayo apho unokukhulula kuphela ngomzamo. Iphupha elo linokubonisa iingxaki zeshishini okanye zezezimali. Omnye umntu unokuzama ukonakalisa igama lalowo uleleyo.
Kwinkcazo edumileyo yamaphupha, i-vortex ephupheni ikwabonisa amandla emvakalelo, athi, nangona kunjalo, akhule ngendlela engalawulekiyo. Isimboli yephupha, umzekelo, ubuninzi be Ukuzonwabisa zibandakanya abo baphatha nabo baphuphayo. Ukongeza, inokulumkisa ngobuhlobo obungangqinelaniyo okanye ikamva eliguqukayo.
Kwakhona, iphupha apho umntu oleleyo engena kwindawo evuthuzayo angangumqondiso wesoyikiso esibi. Kuyacetyiswa ukuba uphephe okungeyomfuneko Mngcipheko thintela, kuba ilishwa elinye lihlala likhokelela kwelinye.
Nangona kunjalo, ngohlalutyo lwamaphupha emveli, isimboli yephupha nayo inecala elifanelekileyo. Ikhuthaza umphuphi ukuba alinde ngomonde de isiphelo sentlekele siphele kwaye kulandele amaxesha abhetele.
Ukuba umntu olele ephupheni unemvakalelo yokuntywila kwi-vortex, enokuthi ikhule ebomini bokwenyani. Iingxaki phezu kwentloko. Woyika ukulahleka kuyo. Nangona kunjalo, kulandela ukutolikwa ngokubanzi kwephupha, umfanekiso wamaphupha nawo ungatsalela ingqalelo kwinto yokuba umntu ophuphayo uxakwe ngokungathandabuzekiyo ngumntu adibene naye.
Uphawu lwephupha «vortex» - ukutolikwa kwengqondo
Ukutolikwa kwamaphupha ezengqondo, uphawu lwephupha "i-vortex yamanzi" luphawu lokuba umntu oleleyo uphantsi kobom. uxinzelelo izibiyeli. Uziva ngathi ujikeleza kwaye uphulukana nolawulo. Ukulindela kwangaphandle kunye neemfuno zakho kuwe zisongela ukukuntywila ubuthongo.
Kwelinye icala, umfanekiso wephupha unokunxulumana nokusebenza komphuphi kunye nemveliso. Ngokokuhlalutya kwephupha kufanekisela uphawu lwephupha. Uxinzeleloukuba, nangona kunjalo, inokubonwa ngokuchanekileyo nangokubi. Yiloo nto umphuphi ngokwakhe angayigweba kakuhle. Mhlawumbi i-subconscious yakho ikwazisa amandla angaziwa ngaphambili ngokulala.
Ngakolunye uhlangothi, isimboli sephupha "i-vortex" ekuchazeni kwengqondo yephupha libonisa ngokukhawuleza ukujongana ngeemvakalelo zakho. Amaza eemvakalelo ezinzulu aqhubeka nephupha kunye nalo kwaye oku kubangela uloyiko. Unokuziva ungancedi kwiimeko ezithile kwaye unqwenela ukuzithemba ngakumbi kuwe.
Uphawu lwephupha «amanzi vortex» - ukutolika kokomoya
Kwinqanaba lokuchazwa kwephupha lokomoya, umfanekiso "wephupha" umela ukuntywila ngokunzulu kubomi obupheleleyo. Umphuphi unokoyika ukulahleka ekuhambeni kwamandla kunye neemvakalelo. Nangona kunjalo, unokufumana ulwazi ephupheni ukuba kuluncedo ukuziyeka uhambe. Ngenxa yokuba i-whirlpool luphawu lwe ubuchule nokuzalwa kwakhona ngokomoya.